Umzi mveliso ongenazingcingo we5G | Kwichina China 5G Abavelisi abangenazingcingo, Abaxhasi
Ii-transceivers ze-SFP28 kukusebenza okuphezulu, iindleko ezisebenzayo zeemodyuli ezixhasa inqanaba ledatha ye-25Gbps kunye nobude bekhonkco ubude be-10km kwi-SMF. Yenzelwe i-25GBASE-LR Ethernet kunye ne-25.78125 Gb / s enye ye-100GE LR4. Ziyathobelana nokuthobela i-SFF-8402 kunye ne-SFF-8472, i-SFF-8432, i-SFF-8431 kunye ne-IEEE 802.3 nge-25GBASE-LR, i-FCC 47 CFR Icandelo le-15, iCandelo B, iTelcordia GR-468-CORE.
I-SFP28 transceiver yimodyuli ye-transceiver ebonakalayo ehambelana kakuhle eguqula i-25Gbit / s serial PECL okanye idatha yombane ye-CML kwi-serial optical data ehambelana nomgangatho we-25GBASE-SR. Yenzelwe uthungelwano lokugcina indawo olukhawulezayo, isihlanganisi sekhompyuter ngokudibanisa, imibhobho yedatha yesantya esiphezulu kunye nonxibelelwano lweRack Rack. Ziyathobelana nokuthobela i-SFF-8431, SFF-8432 kunye ne-IEEE 802.3ae 25GBASE-LR.